तिनीहरूले यो कहिले मार्केटिंग क्लास मा सिकाएनन् Martech Zone
तिनीहरूले यो कहिले मार्केटिंग कक्षा मा सिकाएनन्
म विश्वास गर्दिन कि यो एउटा रहस्य हो, तर म विश्वास गर्दछु सबैभन्दा सफल रणनीति जुन प्राय: बिक्री र मार्केटिंगमा बेवास्ता गरिन्छ तपाईंको नेटवर्कको मूल्य। मानिसहरू लगानी, तथ्या ,्क, अनुसन्धान, ब्रान्डि,, डिजाइन, सुविधाहरू, दक्षता, उत्पादकता, आदि मा फिर्ताको ध्यान केन्द्रित गर्दछन् किनकी उनीहरूको मार्केटिंग प्रयासहरू मार्फत काम गर्छन्। त्यो सबै राम्रो छ र राम्रो छ तर यदि तपाइँ ती सबै चीजहरूको बारेमा विस्तृत रूपमा वर्णन गर्नुहुन्छ भने, ती मध्ये कुनै पनि तपाइँलाई पैसाको लागि मार्ग प्रदान गर्दैन जुन तपाइँको व्यवसायमा बाँच्न र फस्टाउन आवश्यक छ।
मार्केटिंग दर्शक वा समुदाय बिना केहि पनि छैन। यसको मूलमा, म विश्वास गर्दछु कि बिक्री र मार्केटिंगको काम छैन बेच्न, यो समस्या र तपाईंको समाधानको साथ व्यक्ति बीच विश्वास विकास गर्न छ। मैले अविश्वसनीय अभिनव व्यक्तिहरूसँग भेट गरें जसले आश्चर्यजनक उत्पादनहरू विकास गरेका छन्… तर तिनीहरूसँग बेच्ने नेटवर्कको अभाव थियो। र ... बिल्कुल विपरीत ... मैले देखेको छु साँच्चिकै क्रिप्पी उत्पादनहरूले यसलाई बजारमा र फल फलाउँदछ। यो एक महान उत्पादन होईन किनभने, तर त्यहाँ त्यहाँ एक दर्शक थिए कि विश्वसनीय कम्पनीले यसलाई बेचेको छ।
व्यक्तिगत रूपमा, म कम्पनीहरू, उत्पादनहरू वा सुविधाहरूमा मैले प्रयोग गरेको भन्दा बढी लगानी गर्दिन। यसको सट्टामा म व्यक्तिमा ठूलो लगानी गर्छु। म अधिक व्यक्तिहरूसँग भेट्न, बढी मानिसहरूलाई मद्दत गर्न, यसको लागि योग्य व्यक्तिहरूतर्फ ध्यान आकर्षण र बिक्री गर्न र मसँग सीधा फाइदा नहुने अवसरहरूमा समय र शक्ति लगानी गर्न समय निकाल्छु। यो सबै नेटवर्क को हो निर्भर गर्दछ।
त्यहाँ केहि सफल व्यापारीहरू छन् जसलाई म चिन्छु जसले आफ्नो नेटवर्क जलायो। तिनीहरूको पहिलो कम्पनीले उत्कृष्ट गर्छ र उच्च प्रेशर बिक्रीको माध्यमबाट, लिन्छ र राम्रो गर्छ। तर तिनीहरूको अर्को कम्पनी फ्लैट गिर। किन? किनकि भरोसा हराइसकेको छ। यसैकारण उत्कृष्ट कम्पनीहरूले अनुभव वा प्रतिभाको आधारमा भाडामा लिदैनन्, तिनीहरू प्रायः जसो तपाईंले तिनीहरूलाई लिईरहनुभएको नेटवर्कको आधारमा भाडामा लिन्छन्। तपाईंको नेटवर्क तपाईं भन्दा धेरै मूल्यवान छ जब यो बिक्री र मार्केटिंगको कुरा आउँछ। तपाईंको नेटवर्कमा लगानी गर्नुहोस् र तपाईं आफ्नो नियोक्ता वा ग्राहकको लागि बढी मूल्यवान सम्पत्ति पाउनुहुनेछ।
मलाई विश्वास गर्नुहुन्न? तपाईंको वरिपरि सफल भएका व्यवसायहरूलाई हेर्नुहोस्, ग्राहकहरू र उनीहरूसँग काम गर्ने विक्रेताहरूको नेटवर्कमा नजिक नजर राख्नुहोस्। राजस्व मानिसबाट आउँछ - उत्पादहरू, सुविधाहरू वा शान्त लोगोबाट होईन। जबकि हामी एक पेशेवर व्यक्तित्व अनलाइन लगानी गर्न आवश्यक छ, उद्देश्य बेच्नु हुँदैन - यो एक नेटवर्क को निर्माण र खरीद को निर्णय र एक पुल संग बिक्री को बिच को बीच भरिएको हुनुपर्छ। विश्वास गर्नुहोस्.
हाम्रो सब भन्दा मूल्यवान ग्राहकहरु जो हामी संग केही समय को लागी आएका छन् र हामीलाई विश्वास गर्छन्। तिनीहरूले हाम्रो सेवाहरूमा भारी लगानी गरेका छन् र हामीले उनीहरूको प्रदर्शन सुनिश्चित गरेका छौं ताकि हामी उनीहरूको विश्वास कहिल्यै गुमाउँदैनौं। बदलेमा, तिनीहरूले हामीलाई हाम्रो उत्तम रेफरलहरू पनि ल्याउँदछन् ... किनकि विश्वास तिनीहरूको नेटवर्क भित्र पहिल्यै अवस्थित छ। तपाईंको नेटवर्कमा लगानी गर्नुहोस्।
टैग: नेटवर्क मानसामाजिक संजालसोलिकल नेटवर्क
मार्केटिंग स्वचालनमा अवरोधक
अमेरिकामा मोबाइल राज्य